Ajax oo lug la gashay Finalka Champions league kaddib markii ay garaaceen Tottenham lugta koowaad ee wareegga afar dhammaadka… + Sawirro – Gool FM
Ajax oo lug la gashay Finalka Champions league kaddib markii ay garaaceen Tottenham lugta koowaad ee wareegga afar dhammaadka… + Sawirro
( Yurub) 30 Abriil 2019 Kooxda Ajax ayaa guul 1-0 ka gaartay Kooxda Tottenham kulanka lugta koowaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Champions League.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan ciyaartoyda labada dhinac ayaana soo bandhigay qaab ciyaareed aad u sareeya xili Kooxda Ajax ay la yimaadeen gool qeebtii hore ee ciyaarta.
Ajax oo marti aheyd ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u sareeya iyaga oona la yimid gool daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas u dhaliyey van de Beek kaddib caawin uu ka helay
Kooxda Tottenham oo garoonkeeda ku ciyaareysay ayaa ku guuldareysatay in ay abuuraan xitaa hal isku day oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta, lkn daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ayey la soo bexeen dar dar xoogan.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ku soo idlaaday 1-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Ajax, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Spurska ayaa ciyaar waali ah soo bandhigtay qeebtii dambe ee ciyaarta iyaga oona marar badan isku dayey in ay goolka deenta iska soo gudaan balse daafacyada kooxda Ajax aya ku dhabar adeegay in ay goolkooda difaacdaan.
Dhinaca Kooxda Ajax ayaa dadaal dheer ku bixisay sidii ay ku heli lahaayeen gool labaad balse uma suura galin in ay gool helaan.
Tottenham oo ka wanaagsaneed dhigeeda Ajax qeebtii dambe ee ciyaarta ayaa ku hungowday in ay helaan gool dadaal kaste oo ay bixiyeen
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa ayaa ku soo idlaaday 1-0 oo ay ku badiyeen Kooxda Ajax oo marti aheyd, kulan lugta labaad ayaana ka dhici doona garoonka Kooxda Ajax.
HORDHAC : Barcelona VS Liverpool? Kaga bogo macluumaadka kulankan oo dhameestiran iyo Xaqiiqooyinkiisa